काठमाडौ । डीभी अर्थात डाईभर्सिटी भिसा खारेज गर्न अमेरिकी संसद्‌मा खारेज कानुन प्रस्तुत गरिएको छ ।
भर्जिनियाका सांसद बब गोडालेत्तेले डाईभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको खारेज गर्ने लगायतका विषय समेटिएको ‘सेकुरिंग अमेरिकाज फ्यूचर एक्ट २०१८’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।एजेन्सीका अनुसार उक्त कानुनलाई २५ रिपब्लिकन सांसदले समर्थन जनाएका छन् भने डेमोक्रेटिक सांसदले हालसम्म समर्थन गरेका छैनन् । सो कानुन पारित भएमा डीभी चिठा कार्यक्रम खारेज हुनेछ ।
अमेरिकाले वार्षिक ५० हजार आप्रावासीलाई डीभी चिठा मार्फत भित्र्याउँदै आएको थियो । अघिल्लो साता अमेरीकी राष्ट्रपतिले डीभि चिठा परेर आएकाहरु डस्टविनबाट उठाएर ल्याएका भनि टिप्पणी गरेका थिए । यस कार्यक्रमबाट हजारौं नेपालीहरु पनि अमेरिका पुगेका छन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, माघ ०५, २०७४१३:२५
रक्सी पिउन पाउनु पर्ने माग राख्दै महिलाहरुद्वारा सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर !
आज कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै ! ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन !
निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारवाही माग गर्दै आज कञ्चनपुरमा प्रदर्शन !
जनआन्दोलन २०६२–६३का प्रथम शहिद उमेशचन्द्र जसको राजतन्त्रले प्राण लाग्यो !